တွင် မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေများ -602 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
တွင် မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေများ
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 602 အိမ်ခြံမြေများ
500 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
23 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
22 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
21 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
19 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
The 9th Avenue Residence
မေမြို့, မန္တလေး, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
1,550 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း အိမ် for sale at The 9th Avenue Residence
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 995 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် မေမြို့, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင် The 9th Avenue Residence စီမံကိ...
22995 စတုရန်းပေ
Year Built 2021 ဥယျာဉ် မြင်ကွင်း ကိုယ်ပိုင် ဥယျာဉ် လှေကားထစ် စိုက်ခင်း လေသာခန်း
280 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at 1 Bedroom Condo for sale in Mayangone, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 840 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale...
1 1 840 စတုရန်းပေ
3 Bedroom House for sale in Yankin, Yangon
5,000 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း အိမ် for sale in မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 2,000 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 5,000 သိန်း (3 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည...
3 1 2,000 စတုရန်းပေ
3,800 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at2Bedroom Condo for sale in GOLDEN CITY, Yankin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 11,281 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ရန်ကင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale...
2211,281 စတုရန်းပေ
1,350 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at2Bedroom Condo for sale in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 11,625 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သင်္ဃန်းကျွန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo fo...
2211,625 စတုရန်းပေ
450 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 11,840 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သင်္ဃန်းကျွန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo fo...
2211,840 စတုရန်းပေ
Don't miss out! Get notified when new အိမ်ခြံမြေများ for sale are listed တွင် မြန်မာ
210 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at3Bedroom Condo for sale in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,715 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom...
331,715 စတုရန်းပေ
7 Bedroom House for sale in Yankin, Yangon
18,000 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
7 အိပ်ခန်း အိမ် for sale in မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော7အိပ်ခန်းများ နှင့်7ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 4,950 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 18,000 သိန်း (4 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိ...
774,950 စတုရန်းပေ
3 Bedroom House for sale in Thaketa, Yangon
1,450 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,800 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 1,450 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည...
3 1 1,800 စတုရန်းပေ
9,450 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 4,036 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 9,450 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
334,036 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,500 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 6,000 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
18,000 သိန်း (5 သိန်း/စတုရန်းပေ)
5 အိပ်ခန်း အိမ် for sale in မြန်မာ
563,300 စတုရန်းပေ
800 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,620 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 800 သိန်း (0 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
3 1 1,620 စတုရန်းပေ
3 Bedroom House for sale in Shwe Pyi Thar, Yangon
4,500 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,600 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,500 သိန်း (3 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
331,600 စတုရန်းပေ
3,000 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at3Bedroom Condo for sale in Sanchaung, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 250,264 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for...
32250,264 စတုရန်းပေ
2,750 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at The Century Condominium
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,749 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် လှိုင်သာယာ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် The Century Condominium...
222,749 စတုရန်းပေ
4 Bedroom House for sale in Yankin, Yangon
7,000 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
4 အိပ်ခန်း အိမ် for sale in မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,000 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 7,000 သိန်း (4 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
422,000 စတုရန်းပေ
1,850 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,200 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 1,850 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
331,200 စတုရန်းပေ
2,500 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3216,652 စတုရန်းပေ
3 Bedroom House for sale in Hlaing Thar Yar, Yangon
လှိုင်သာယာ, မြောက်ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
3,900 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,176 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 3,900 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
332,176 စတုရန်းပေ
50,000 သိန်း (4 သိန်း/စတုရန်းပေ)
7710,000 စတုရန်းပေ
3 Bedroom House for sale in Lanmadaw, Yangon
လမ်းမတော်, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
4,000 သိန်း (7 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 563 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,000 သိန်း (7 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်...
32563 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,750 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 800 သိန်း (0 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
3 1 1,750 စတုရန်းပေ
5 Bedroom House for sale in Yankin, Yangon
7,500 သိန်း (4 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,600 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 7,500 သိန်း (5 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
541,600 စတုရန်းပေ
10,000 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,720 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 10,000 သိန်း (4 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိ...
542,720 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,620 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,300 သိန်း (3 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
421,620 စတုရန်းပေ
8,000 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 3,200 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 8,000 သိန်း (3 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည...
4 1 3,200 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,200 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 2,500 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
333,200 စတုရန်းပေ
2 Bedroom House for sale in Yankin, Yangon
12,500 သိန်း (7 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း အိမ် for sale in မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,625 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 12,500 သိန်း (8 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိ...
221,625 စတုရန်းပေ
29,000 သိန်း (9 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော7အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,200 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 29,000 သိန်း (9 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိ...
733,200 စတုရန်းပေ
1 - 30 ၏ 602 အဖြေများ
သင့်အတွက် 500 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 104 သိန်း - 50K သိန်း
သင့်အတွက် 23 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 499 သိန်း - 4K သိန်း
သင့်အတွက် 22 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 329 သိန်း - 22K သိန်း
သင့်အတွက် 21 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 499 သိန်း - 40K သိန်း
ဝယ်ပါ : 899 သိန်း - 11K သိန်း
ဝယ်ပါ : 1.14K သိန်း - 11K သိန်း
ဝယ်ပါ : 239 သိန်း - 27K သိန်း
ဝယ်ပါ : 3.2K သိန်း - 3.7K သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံဟုလည်းလူသိများသောမြန်မာနိုင်ငံသည်Southeastရိယာအကျယ်အ ၀ န်းအားဖြင့်အရှေ့တောင်အာရှကုန်းတွင်းပိုင်းပြည်နယ်များအနက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ၆၇၆,၅၇၈ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသည်။ ၎င်းကို ၁၉၆၂ မှ ၂၀၁၁ အထိဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သောစစ်အစိုးရ၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် ၁၉၆၂ မှ ၂၀၁၁ အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကအပယ်ခံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့တွင်နိုင်ငံသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။ စစ်အစိုးရမှဒီမိုကရေစီသို့ပြောင်းလဲခြင်း။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ပထမဆုံးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲသည်တိုင်းပြည်အတွက်အရေးပါသောအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ တောက်ပသောအနာဂတ်အတွက်အကောင်းမြင်မှုလှိုင်းကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုလျင်မြန်စွာ (နှစ်စဉ် ၇% ကျော်ကျော်) ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ တည်နေရာနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များသည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစိတ်အားထက်သန်စေသည်။
မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ ပုံစံများ
ဦးတည်ရာများနှင့် ပျမ်းမျှများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်ကို လေ့လာပါ။
အလယ်အလတ်ရောင်းဈေးသည် မြန်မာ တွင် ခန့်မှန်းချေ 2,400 သိန်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ရှိ ၁စတုရန်းပေ အတွက် အလယ်အလတ်ဈေးနှုန်းမှာ2သိန်းဖြ စ်သည်။ မြန်မာ တွင် ရောင်းရန်အတွက် 602 အိမ်ခြံမြေများရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်လူ ဦး ရေ ၅၄ သန်းကျော်နေထိုင်ရာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှတွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံး ၅ နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ဟုလည်းလူသိများသောရန်ကုန်သည်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၅ သန်းကျော်သည်ထိုဒေသအတွင်းနေထိုင်ကြသည်။ ဤမြို့သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိတိုင်းပြည်၏မြို့တော်အဖြစ်တည်ရှိသည်။ တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံခြားသားများအားတံခါးဖွင့်လိုက်ကတည်းကဤမြို့သည်အပြောင်းအလဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုအခါသူသည်ဖက်ရှင်ဟိုတယ်များ၊ အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိအရက်ဆိုင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ဤမြို့၏အကျော်ကြားဆုံးသောနေရာမှာရွှေတိဂုံစေတီတော်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်၏အမြင့်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀ မီတာရှည်သောစွယ်စုံရုပ်တုသည် Singuttara Hill ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးမြို့၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုလွှမ်းမိုးသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အချက်အချာဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏နေရာဖြစ်သောရန်ကုန်သည်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
၉ ရာစုမှ ၁၃ ရာစုနှစ်များအတွင်းပုဂံနိုင်ငံတော်၏မြို့တော်အဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကအရှေ့တောင်အာရှတွင်အကြီးမားဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် UNESCO ၏ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတွင်ဘုရားကျောင်း ၂၀၀၀ ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ရွှေဇီဂွန်ဘုရားကျောင်း၊ ထီးလင်မင်ဘုရားကျောင်း၊ အာနန္ဒာဘုရားကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းအပြင် visitors ည့်သည်များသည်fromရာဝတီမြစ်ပေါ်ရှိအထက်ရှိဘုရားကျောင်းများကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ပုဂံ၏လှပသောနေဝင်ချိန်ကိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်ပူဖောင်းပူဖောင်းဖြင့်ပျံသန်းနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြားထင်ရှားသောမြို့တစ်မြို့မှာမန္တလေးမြို့ဖြစ်ပြီးပုဂံနှင့်တူညီသောဒေသတွင်တည်ရှိသည်။ um ည့်သည်များသည် Mahumuni Buddha ဘုရားကျောင်းသို့သွားနိုင်သည်၊ မြွေဘုရားကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ မန္တလေးတောင်ထိပ်မှနေဝင်ချိန်ကိုကြည့်နိုင်သည်။
စီးပွားရေးတိုးတက်မှု - မြန်မာ့စီးပွားရေးသည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၆% မှ ၈% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဂျီဒီပီသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၈.၉ ဘီလီယံမှ ၇၇ ဘီလီယံသို့ ၇၇ ဒေါ်လာအထိတိုးတက်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ကျန်းမာကြီးထွားမှုနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်။
မဟာဗျူဟာကျသောနေရာ - အာရှအလယ်ပိုင်းရှိတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယကြားရှိမြန်မာနိုင်ငံတည်နေရာသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ၎င်း၏အနေအထားကိုတိုင်းပြည်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးကွက်နှစ်ခုသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းရန် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေသည်နှစ်စဉ်ဆက်လက်တိုးပွားလျှက်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားသားများသည်မြို့တော်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ ၎င်းကအိမ်ခြံမြေဝယ်လိုအားကိုတိုးမြှင့်စေပြီး၊ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငှားရမ်းလိုသူများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ တွင် အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ခြံမြေ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမျ
အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစား ပျမ်းမျှ ဈေးနှုန်း 1 အိပ်ခန်း (112 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 1,920 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (158 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 2,350 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (182 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 3,580 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (60 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 6,770 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (26 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 10,200 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာအမေရိကန်နှင့်ဥရောပတို့ထက်နည်းသည်။ သို့သော်ငြားလည်း၊ ငှားရမ်းခများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ပစ္စည်းများ၏ဈေးနှုန်းမှာကွဲပြားသောကြောင့်နေထိုင်သူများ၏နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်စျေးပေါမည်ဟုမျှော်လင့်မထားသင့်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေနှင့်သက်သောင့်သက်သာနေထိုင်နိုင်ရန်အနည်းဆုံးတစ်လလျှင်အနည်းဆုံးကျပ် ၁,၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၀၀) လိုအပ်ပြီးမိသားစုလေးယောက်မှမိသားစုသည်အနည်းဆုံးကျပ် ၃,၃၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ခန့်) လိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဝင်ငွေကြေးမှာမြန်မာကျပ်ငွေကျပ်ဖြစ်ပြီး ၁ ဒေါ်လာမှငွေလဲနှုန်းမှာခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။ 1,360 MMK ။ နိုင်ငံတကာကတ်များကိုလက်ခံသော ATM စက်များသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့လာပြီးကျေးလက်ဒေသများ၌ရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သေးသည်။ ရန်ကုန်၊ ပုဂံနှင့်မန္တလေးကဲ့သို့သောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားareasရိယာအများအပြားတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလက်ခံသည်။
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၉၀% ခန့်သည်ဤဘာသာတရားကိုလိုက်နာကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ (၄%) နှင့်အစ္စလာမ် (၄%) တို့သည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအသေးဆုံးဒေသများဖြစ်သည်။ ကျန်လူ ဦး ရေမှာမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ၊
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကာလရှည်ကြာနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားများသည်တည်းခိုခွင့်ဗီဇာနှင့်အကြိမ်များစွာခရီးအထူးအထူးဗီဇာရရှိရန်လိုအပ်သည်။ နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးလမှတစ်နှစ်အထိထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ၀ င်ခွင့်တစ်ခုတည်းအတွက်သာအကျုံးဝင်သောကြောင့်နိုင်ငံခြားသားများသည်၎င်းတို့အားနိုင်ငံမှထွက်ခွာခွင့်နှင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် Multiple Journey Special Re-entry Visa လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကြောင်းပြချက် (၃) ချက်
1. စီးပွားရေးတိုးတက်မှု - မြန်မာ့စီးပွားရေးသည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၆% မှ ၈% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဂျီဒီပီသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၈.၉ ဘီလီယံမှ ၇၇ ဘီလီယံသို့ ၇၇ ဒေါ်လာအထိတိုးတက်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ကျန်းမာကြီးထွားမှုနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်။
2. မဟာဗျူဟာကျသောနေရာ - အာရှအလယ်ပိုင်းရှိတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယကြားရှိမြန်မာနိုင်ငံတည်နေရာသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ၎င်း၏အနေအထားကိုတိုင်းပြည်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးကွက်နှစ်ခုသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
3. အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းရန် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေသည်နှစ်စဉ်ဆက်လက်တိုးပွားလျှက်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားသားများသည်မြို့တော်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ ၎င်းကအိမ်ခြံမြေဝယ်လိုအားကိုတိုးမြှင့်စေပြီး၊ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငှားရမ်းလိုသူများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။